Featured Archives - Khonumthung Media Group
#Unicode By နှငျးကို – အသကျ ၂၅ နှဈ ပွညျ့ပွီးသူတိုငျး ရှေးကောကျခံပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့အတှကျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကွီးမှ ပျေါထှကျလာတဲ့ အနိုငျရအမတျလောငျးတှရေဲ့ အသကျအပိုငျးအခွားတှကေို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။…
#Unicode ဆလိုငျးကြဲအိုဘိချထောငျ မကွာသေးခငျက အနိုငျရ NLD ပါတီ၏ တိုငျးရငျးသား (၄၈) ပါတီမြားထံ ပေးပို့သော စာသညျ မွနျမာ့နိုငျငံရေးမှာ အငျမတနျစိတျဝငျစားစရာ ဖွဈလာပါသညျ။ အနိုငျရပါတီအနဖွေငျ့…
#Unicode ဦးစှာ ကိုဗဈ (၁၉) ရဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေို ဦးစှာပွောပွပေးလိုပါတယျ။ လက်ခဏာတှကေတော့ အဖြားရှိလာတာ၊ ခြောငျးဆိုးတာ၊ အသကျရှုမဝတာ၊ အသကျရှုခကျခဲတာ၊ အားအငျကုနျခမျးတာတှဖွေဈပါတယျ။ တဈပတျအကွာမှာတော့ အားအငျကုနျခမျးပွီး…
#Zawgyi UNHCR နှင့် Unilever တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Coronavirs တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဆပ်ပြာခဲ (၆) သိန်းကျော်နှင့် အခြားပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးအပ်ခဲ့သည်။…
#Zawgyi နှင်းကို (BNI – MPM) – ရေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုဗစ်နှင့် စစ်ကို တစ်ပြိုင်တည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်။ တစ်ဖက်တွင် ရပ်တန့်တစ်ဆို့နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်း…
#Zawgyi ဗိုင်းရပ်စ် (Virus) ဟာ ဗက်တီးရီးယား (Bacteria)၊ ပါရာဆိုက် (Parasite) လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေနဲ့ ဘာကွာခြားသလဲ? Virus ဆိုတာဘာလဲ? Virus ကို…
Salai Van Cung Lian (UK) #Zawgyi နိဒါန်း ဗြိတိသျှအင်ပါယာ ချင်းတောင်ကိုသိမ်းပိုက်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းစဉ် ချင်းလူမျိုးများနှင့် တိုက်ပွဲမြောက်များစွာ တိုက်ခဲ့ရသည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွေထဲမှ စီးယင်းနယ်…
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(အေအေ)တပ်ဖွဲ့တွေ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ စတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတာ ခုဆိုရင် ၄ နှစ်ကျော်ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ချင်းပြ ည်သူတွေ နေရပ်စွန့်ခွါပြီး စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရသလို လူ့အခွင့်အရေးချိူးဖောက်မှုတွေကော်…
ရေးသားသူ/ Mglay Boihring – အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေအားဖြင့်လည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ ဒီကနေ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်/…